काला सागर स्थिर र छवि Ivana Ayvazovskogo सबैभन्दा बारम्बार विषय हो। Theodosius को एक देशी, लगभग हृदय गरेर ठूलो seascape आफ्नो मूल किनारा थाह, त्यसैले आफ्नो काममा काला सागर को पानी यति वैविध्यपूर्ण छ। "काला सागर" - सादगी र भित्री बल आकर्षित कि Aivazovsky चित्रकला। यो समुद्र तर केही देखाइएको छैन, र त्यो के यो पातलो र सुन्दर बनाउँछ छ।
समुद्री चित्रकार इवान Aivazovsky
वास्तविक नाम पहिचान मास्टर seascape - Hovhannes Ayvazyan, उहाँले एउटा घरबारविहीन आर्मेनियाली व्यापारी परिवार आउँछ। कारण कठिन वित्तीय स्थिति गर्न जवान Aivazovsky उठयो सकेन एक सभ्य रेखाचित्र र चित्रकला को कला सिक्ने, अझै Feodosia आफ्नो प्राकृतिक प्रतिभा मुख्य architect को ध्यान आकर्षित गरेको छैन।
आफ्नो उपकारक देखि प्रारम्भिक सहायताको पछि Aivazovsky चाँडै स्वीकृति र लोकप्रियता हासिल गर्न सक्षम थियो। यस शैक्षिक स्थिति कला प्राप्त एक प्रमुख भूमिका सामान्य र विशेष समुद्र परिदृश्य पानी चित्रण गर्न अद्वितीय तरिका प्ले।
आफ्नो धेरै पोट्रेट, विधा दृष्य र धार्मिक विषयवस्तुहरू मा दुर्लभ विषयहरू द्वारा प्रमाणित चित्रकार गरेको प्रतिभा, समुद्र को तस्बिरहरू सीमित छैन। तथापि, एकमात्र र unfading आवेग Aivazovsky समुद्र थियो।
कामहरू Aivazovsky मा काला सागर
एउटै नामको मात्र चित्रकला, ठूलो समुद्री चित्रकार अक्सर आफ्नो canvases मा काला सागर पानी चित्रण गरिएको - "काला सागर" (Aivazovsky चित्रकला, 1881 मा लेखिएको) भन्ने तथ्यलाई बावजुद। कलाकार Feodosia जन्म र त्यहाँ आफ्नो जीवनको सबैभन्दा बस्ने थियो। Aivazovsky पानी सम्भव छैन यो सबैभन्दा fickle र परिर्वतनशील तत्व हो देखि, प्रकृति देखि आकर्षित गर्न छ कि विश्वास गरे। उहाँले आफ्नो हालत विभिन्न स्मृति फोटो सकून् भनेर तथापि, समुद्र तट र मूल काला सागर को छालहरू, उहाँलाई परिचित थिए।
काला सागर, कलाकार को स्थिर विषय भएको छ जो लेखक समर्पित चित्रहरु को विशाल कलात्मक सम्पदाको बीचमा सबै भन्दा ठूलो संख्या। बिहान सूर्य वा सूर्यास्त आगो मा, शान्त र हावाहुरीमा, दिन र रात - Aivazovsky यसको सबै guises मा काला सागर चित्रण गरिएको। ठूलो समुद्री चित्रकार रचनात्मकता आफ्नो पैतृक किनारा प्रेम र स्नेह रूपमा पक्कै छोड्छ।
Aivazovsky "काला सागर" द्वारा चित्रहरु विवरण
आफ्नो मूल किनारा को बारम्बार छवि बावजुद Aivazovsky को कलात्मक सम्पदाको त्यहाँ एउटा मात्र चित्र, बस "काला सागर" भनिन्छ जो छ। यो चित्रकला 1881 मा कलाकार द्वारा सिर्जना र दर्शक बस आँधी अघि क्यानभास मा स्थिर असीमित समुद्र को एक दृश्य प्रदान गर्दछ थियो। यस चित्रकला को दोस्रो शीर्षक - "काला सागर मा आँधी बाहिर खेल्न सुरु हुन्छ।"
प्लट को सादगी र लगभग पूर्ण proportioned संरचना द्वारा विशेषता Aivazovsky चित्रकला, - "काला सागर"। क्यानभासमा, बारम्बार बेचैन, तर अझै उच्च छैन छालहरू, साना फोम crests संग सजाया संग darkened समुद्र चित्रण गरिएको छ। यस्तो छालहरू प्रकाश को रेज र समकालीन कलाकार भित्र जस्तै चमकिलो "छालहरू Ayvazovski" नाम द्वारा penetrated छन्।
को darkened आकाश को शीर्ष मा, आँधी समुद्र तल, र तिनीहरूलाई बीच बल्लतल्ल भूमि को पातलो पट्टी तुवालो को पर्दा मार्फत देखेको र उनको एक्लो जहाजमा यात्रा गर्नु गर्न tending - बादल मडारिरहेको लाइन दुई बराबर भागमा लगभग पूर्ण चित्र विभाजन गरेको छ।
"काला सागर" - आँखा तनावमुक्त अनुरूप र अत्यन्तै व्यावहारिक रंग प्यालेट आकर्षित कि Aivazovsky चित्रकला। तस्विर संरचना समुद्र र आकाश, प्रत्येक अन्य प्रतिबिम्बित भने यी दुई भागहरु को तत्व, द्वारा bisected छ बाहेक।
दाँया मा गाढा बादल मर्ज र उर्लंदो समुद्र को गाढा छालहरू एउटा equilateral वेज गठन। चित्रमा प्रकाश र छाया को प्ले अलिकति बाँया बादल मडारिरहेको गर्न कुर्कुच्चा को dynamism जोड दिन्छ जो एउटा सक्रिय गीत, सिर्जना गर्छ।
रंग को आवेदन मा विषमता गर्न फिलिम विपरीत मा Symmetrical आकार, आकाश रंग, बैजनी, नीलो, आकाश नीलो, खैरो र हाथीदांत सहित एक धनी प्यालेट पूर्ण हुँदा, समुद्र को आकाश मुनि बाहिर फैलाउन यस्तो chromatic किसिम को घमण्ड गर्न सक्दैन। तस्विर Aivazovsky गरेको "काला सागर" मा समुद्र नीलो-हरियो, मौन रंग बनेको छ। "काला सागर" को तस्वीर (Aivazovsky masterfully पानी तत्व को राज्य चित्रण गरिएको) विवरण को एक प्रशस्त र रंग को एक दङ्गा र व्यावहारिक, प्राकृतिक सौन्दर्य र एक चर्किरहेको समुद्र को बल पेश गर्नु हुँदैन।
Aivazovsky द्वारा अन्य चित्रहरू मा काला सागर
काला सागर अनन्त काम जो विशाल seascape, क्यानभासमा छोड्न गर्नुभयो लामो समय को लागि Aivazovsky को विषय र कहिल्यै थियो। कलाकार काम सुंदरता celebrates र जल को प्राकृतिक शक्ति को variability, यो Aivazovsky नजिकै काला सागर आफ्नो सबै विविधता र impermanence आफ्नो चित्रहरु मा देखाइएको छ कि छैन अचम्मको छ।
शान्त र निर्मल काला सागर, सेटिङ सूर्य को किरण साथ भर्नुभएको "लग Sevastopol खाडी मा" र "Gurzuf" र यसको पानी, को चित्रहरु मा देख्न सक्नुहुन्छ "क्रिमीआ को हिमालहरूबाट समुद्र दृश्य" को चित्रहरु र चित्रण गरिएको "को क्राइमन तट मा सूर्यास्त।" Aivazovsky "काला सागर मा तूफान" द्वारा चित्रहरु वर्णन seascape को उत्तराधिकार एउटै नाममा तीन चित्रहरु छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा जटिल छ।
Aivazovsky को बढ्दो सूर्य ( "सूर्योदय Feodosia मा") को पहिलो रेज र एक gale ( "समुद्र देखि ओडेसा को दृश्य") मा काला सागर चित्रण गरिएको। कलाकार गरेको चित्रहरु मा समुद्र छालहरू कुहिरो ( "कुइरो लागेको बिहान") द्वारा अवशोषित वा उज्ज्वल चन्द्र ( "Feodosiya। Moonlit रात") जोड दिइएको छ। काला सागर प्रत्येक छवि समुद्री चित्रकार इवान Aivazovsky मूल किनारा को प्रकार लेख्न बन्द थिएन, आफ्नो स्मृति सबै आफ्नो जीवन, र पनि इटाली कदर बताए।
इटालियन मोशाको - Florentine "पत्थर मा चित्रकला"
को किंडरगार्टन मा पर्खाल शैक्षिक तस्वीर
Konstantin Korovin: इंप्रेशनिस्ट चित्रकार
कसरी पेन्सिल मा एक नाक आकर्षित गर्न?
Vitebsk क्षेत्र को पोखरी: विवरण, फोटो
छोराछोरीको वस्त्र को प्रमाणीकरण। के परिवर्तन भएको छ?
अस्पताल हृदयरोग। हृदय प्रणाली को उपचार भेटी रूस मा रिसोर्ट्स सूची,
को ताप केबल स्थापना। कसरी आफ्नो हात संग ताप केबल जडान गर्न
के मालिश कम्पन छ: प्रक्रिया र प्रमाण को विवरण
साथीहरूसँग फोटो: विचार, सल्लाह
कुनै समस्या संग "एन्ड्रोइड" मा मात्रा कसरी वृद्धि गर्न